Ndi nne na nna | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Education nke ụmụaka
Ọ bụ ya n'ezie? Nke a ọ bụ uri uri nke Leo Tolstoy?
Ọ bụ ya n'ezie? Nke a ọ bụ uri uri nke Leo Tolstoy? En3ep35 -4-5ae Dị nnọọ mkpa isi ihe) ezi amaokwu Sun nwere ike ịbụ, ọ bụghị otu isi iyi nke data dị otú ahụ ...
iwe ederede iwe
Gee mkpesa sitere na akwa nwa anụ .. .... na - ewe iwe iwe na mmeghachi ahụ nfụkasị ahụ maka anụ ahụ n’otu ntabi anya. Anyị na-eji mmanu mmanu AdNUMan 0,1% na ọ dịghị ihe ọjọọ mere. Tinye ya na saịtị mgbakasị ahụ nwere mkpa dị larịị, na mbụ…
Skype Esi gbanwee aha akaụntụ na Skype?
Skype Esi gbanwee aha akaụntụ na Skype? Ee, m gbalịrị. naanị ị nwere ike ịmepụta nbanye ọhụrụ. Ịgbanwe Skype Nbanye ma ọ bụ Ngosipụta Aha Ị pụghị ịgbanwe Skype Nbanye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọzọ ...
Gwa gbasara kaadị ụmụaka. SPb. Ònye nwere? Ihe dị mma? Ị na-eji ha? Kedu ka ha si sụgharịa ha?
Gwa gbasara kaadị ụmụaka. SPb. Ònye nwere? Ihe dị mma? Ị na-eji ha? Kedu ka ha si sụgharịa ha? Ụmụ obere Petersburgers mgbe ha na-amụ nwa nwetara obere onyinye sitere na obodo ha ...
Artyom na Artyom bu otu aha? Ma kedu ka aha etiti ga-esi nọrọ n'aha Artyom - Artyomovich ma ọ bụ Artyomievich?
Artyom na Artyom bu otu aha? Ma kedu ka aha etiti ga-esi nọrọ n'aha Artyom - Artyomovich ma ọ bụ Artyomievich? Artm na Artemy bu aha abuo abuo. Mana ha nile na - akpo Artemiev…
Kedu esi dee ihe edeturu onye nkụzi maka ịkụcha klas?
Kedu esi dee ihe edeturu onye nkụzi maka ịkụcha klas? Ivanova Marya Ivanovna site na aha gị * Cheta aha zuru oke nke onye nkụzi (ma ọ bụ onye nduzi, na-achọ onye aha gị dere), nwa m / nwa * Nwa aha nwata *
Banyere otu n'ime ogige ahụ.
Banyere otu n'ime ogige ahụ. anyị nwere otu agwakọta, site na 2 ruo 6 afọ, enwere oge na nwata, nwa ahụ na-eje ije na-atọ ụtọ, na-agwa ndị okenye okwu. a na-ebute ụmụaka ụfọdụ n'ìgwè ha ...
nyocha okwu na okwu OZI kwesịrị ilele nke abụọ O. na-echere azịza ...
okwu nnwale maka okwu VOICE kwesiri ileba O nke abuo anya ichere azịza ... Nke a abughi okwu nnwale. Ọtụtụ okwu a na-enweta na mkpụrụokwu na ụlọ akwụkwọ praịmarị dị ka nke a na-enweghị ike ịkọwa, n'eziokwu ...
Nwata ahụ nwere ezé mbụ, gịnị jikọrọ ezé?
Nwata ahụ nwere ezé mbụ, gịnị jikọrọ ezé? Ọtụtụ ndị nna anyị ochie nọ na-echegbu onwe ha banyere ihe nwere ike ịbịakwute onye amoosu nke ga-eme ihe mgbapụta dị iche iche nke chọrọ iji merụọ ahụ. Ọ bụ ya mere ...
Mamamies, olee afọ ole ị ga - enye mkpụrụ osisi citrus na nwatakịrị? ... dị ka temon tii
Mama, kedu afọ m nwere ike inye nwa m citrus mkpụrụ osisi? ... dịka ọmụmaatụ, lemon maka tii Site na ọnwa 8 Site na afọ m nyere otu mpempe akwụkwọ Mandarin, mkpụrụ osisi grape na lychee, ọ nweghị ihe m malitere inye 1,6 ... ọ dị ka ọ bụghị ...
Kedu ihe dị iche n'agbata mkpebe na ịmepụ?
Kedu ihe dị iche na njide na nkuchi nwata? inwere ike iju nkporo .. nkuchi adighi anya ... ihe a nile bụ ahihia ... olee otu ị ga - esi dee akwụkwọ ị nwere ike dee ogo nke nwatakịrị kuchiri ya ... ọ ga - aka mma ma ọ bụrụ na…
Afọ ole ka nwata nwere ike inye kefir “okenye”?
Afọ ole ka nwata nwere ike inye kefir “okenye”? Site na afọ abụọ, ọ ga-ekwe omume ịnye ụmụaka kefir site na afọ 2, na tupu afọ a, ọ ka mma inye Narine, a na-eme ya na ...
Ònye mere nwa agbọghọ ahụ aha ya bụ Saịrọs baptizim? baptizim na aha a? ma ọ bụ nke ọzọ ka e nyere n'oge baptism. abụghị onye na-abụghị Cyrus
Ònye mere nwa agbọghọ ahụ aha ya bụ Saịrọs baptizim? baptizim na aha a? ma ọ bụ nke ọzọ ka e nyere n'oge baptism. aha na-abụghị nke Krista nke Saịrọs Aha nwanyị aha Saịrọs sitere na nwoke aha Saịrọs (ikekwe ị maara ...
Kedu ihe nyocha nyocha? a chọpụtara na nwatakịrị ahụ nwere onye na-ahụ maka ọrịa
Kedu ihe nyocha nyocha? nwatakịrị ahụ achọpụtala na onye na-ahụ maka ọgwụ na-agwọ ọrịa ugbu a bụ nke a na-akpọ PP nke CNS (ọnụọgụ ahụ nke CNS). Ọgwụgwọ: Massages, ọ bụrụ na ọgwụ ndị a edepụtara adịghị mkpa ịtụ egwu ha, ma ...
Achịcha ihe ọṅụṅụ ndị a kpụpụrụ na oyi
Ighaara nwa mpempe mmiri na mmiri oyi. Oge ọzọ, emela ihe dị mma, kama ịzụta na ụlọ ahịa ọgwụ mgbe ị jisịrị usoro. tupu ị na-eme ihe na-enye rbenk dị gị mkpa ọ dịkarịa ala ka onwe gị ...
Nyocha? nke a bụ ihe mgbaàmà nke mbufụt, ọnụego nke leukocytes na mmamịrị 2-3 n'ọhụụ ọhụụ na ụmụ nwoke, na 5-6 n'ime ụmụ nwanyị. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere ike ịbụ: 1. wezuga nchịkọta xnumx na-ezighi ezi. mbufụt nke urogenital usoro
Kedu otu esi arụ ọrụ nke kọmitii nne na nna na ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Kedu otu esi arụ ọrụ nke kọmitii nne na nna na ụlọ akwụkwọ ọta akara? Ezi ụbọchị! Biko mara onwe gị na ọkwa nke kọmitii nne na nna na ụlọ akwụkwọ ọta akara. 1. Ọrụ na ọdịnaya nke ọrụ ahụ. A na-ahazi kọmitii nne na nna iji ...
Ihe egwuregwu dị mkpa iji zụta nwa na 2 afọ
Kinddị ụmụaka ji egwuri egwu kwesịrị ịzụta mgbe ọ dị afọ 2 grandmụ ụmụ m na-enwe mmasị na mosaics buru ibu, ihe egwuregwu dị larịị site na 4-6 ruo 9-12 na akụkụ ndị ọzọ. Echefula ihe banyere cubes - mebere 4-6 na ...
Mama na-agwa m mgbe m ga-amalite inye nwa azụ na gịnị?
Mama na-agwa m mgbe m ga-amalite inye nwa azụ na gịnị? Krasnoprku nwere ike inye ọnwa abụọ. Ma naanị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ n'oge ahụ nwere 32 niile dị ...
Onwa ole ka nwa gị malitere ije na nke aka ya?
Onwa ole ka nwa gị malitere ije na nke aka ya? Childrenmụaka niile dị iche. Ofmụ m nwoke abụọ jere ọnwa mgbe ọnwa itoolu (nso iri). Amaara m nwoke tozuru etozu, onye dị obere ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,387.